Izindlela ezihamba phambili zeGarageband ze-Android (2020) - Izinhlelo Zokusebenza
Izindawo ezihamba phambili zeGarageband ze-Android
Noma kunjalo, ukuthola ukuthi iyiphi enye yezindlela ezinhle kakhulu zeGarageband ezenzelwe wena?Yebo, sikubambile.I-apula. Inc yakhipha iGarageband ngo-2004. Iyatholakala kuwo wonke amapulatifomu ahlukahlukene. I-MacOS iyayisebenzisa, i-iOS iyayisebenzisa, futhi ne-iPadOS iyayisebenzisa, kepha ayikho into efana neGarageband njengamanje uma kukhulunywa nge-Android. Yini okufanele uyenze kuleli cala? Ungakhathazeki.
Noma ingekho iGarageband esemthethweni ye-Android, kunezindlela eziningi ezinhle ongazisebenzisa. Sizokuthatha sikhethe okuhle kakhulu ukuze kube lula kuwe ukuthi ukhethe phakathi kwabo.
IGarageband yi-DAW (Digital Audio Workstation) evula amadivayisi asebenzela kuwo efektri yomculo. Inezinsimbi ezibonakalayo kuyo. Ungenza noma yiluphi uhlobo lwenothi ngalezi zinsimbi ngaphandle kokuthi uludlale, ngakho-ke, noma ungeyena umculi, ungaba ngumkhiqizi. Imisindo evela eGarageband isetshenzisiwe kuma-mega-hits we-Rihanna, i-Usher, i-Grimes, njll. Isetshenziswa kakhulu ngabakhiqizi be-EDM, bobabili abaqalayo kanye nochwepheshe.
10 Mahhala Beat Ukwenza Softwares
Izinhlelo zokusebenza ezihamba phambili ze-Android Music Player
Ngezansi sibhale izinketho zethu ezinhle kakhulu zezinye izindlela zeGarageband ye-AndroidOS.
Ukukhetha Okuphezulu Kwezinye Izindlela ze-Garageband ze-Android (2020):
Umenzi womculo uJam
I-FL studio ephathekayo
I-J4T Multitrack Recorder
Ngakho ake singene ngemininingwane.
1.Umenzi Womculo Jam
Ngalolu hlelo lokusebenza oluvela kubathuthukisi beLoudly GmbH, ungakwazi ukudala umculo bese uwukhulula ezigidini zabanye abasebenzisi beMMJ emhlabeni jikelele. Isebenziseka kalula, futhi akunandaba ukuthi usaqala noma uchwepheshe, kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Uma ungumsebenzisi we-Ex Garageband, lokhu kuyindlela engcono kakhulu kuwe.
I-database yayo igcwele izihibe kusuka ekukhetheni kohlobo olubanzi njenge-EDM, iDubstep, iNdlu, iHip-Hop, iDwala, iPop, njll.Ngomxube weziteshi eziyisishiyagalombili, amathuba awapheli. Ungenza umculo omnandi futhi uhlanganise izingoma usohambeni ephathini yomngani.
Uhlelo lokusebenza lukalwe ngo-4.6 / 5 esitolo sokudlala se-Google.
I-Music Maker Jam inikeza iqoqo lezici ngaphakathi kohlelo lokusebenza. Ake sibheke ezinye zazo.
AmaTweak Tempos nama-harmonies futhi asebenzise imiphumela ebalulekile yemisindo njengokukingiza, ukubambezeleka nokubuyela emuva.
Izingoma ze-Remix. Ngesici esimnandi esimnandi esikuvumela ukuthi uphinde uhlanganise amathrekhi ngokuShakaza idivayisi yakho.
Sebenzisa izingoma zakho ezirekhodiwe ngamabhithi akho ahlukile futhi uzenzele ngokuzenzakalela ukuzwakala kungumlingo.
Yabelana izingoma zakho khona manjalo kuyo yonke imithombo yezokuxhumana kalula futhi ngokushesha.
Joyina umphakathi we-Music Maker Jam okhethekile, onezingoma ezingaba yizigidi eziyisithupha ezilayishwe kuwo.
I-Music Maker Jam imahhala ukulanda esitolo se-google sokudlala. Noma kunjalo, kukhona ukuthenga ngaphakathi nohlelo ukufinyelela zonke izici ze-premium.
I-n-Track Studio isitudiyo sokuqopha esiphelele ephaketheni lakho. Ungarekhoda inani elingenamkhawulo lezingoma kanye namathrekhi we-MIDI. Inethoni yamasampula angenabukhosi. Ibuye ikuvumele ukuthi usebenzise ama-Guitar Amps kanye nokushuna kwe-Vocal nokubuyela emuva.
Inezinsimbi ezakhelwe ngaphakathi ze-Virtual, kepha ungaxhuma izinsimbi zomzimba kusuka ngaphandle uma ufisa.
Uhlelo lokusebenza lulinganiswe ngo-4.2 / 5 esitolo sokudlala se-Google.
i-n-Track ingenye ye-DAW elayishwe kakhulu kunkundla ye-Android. Nazi ezinye izici zayo
Ama-synths akhelwe ngaphakathi asekela amathrekhi we-MIDI
Ikuvumela ukuthi wenze i-Reverbing, Chorusing, Flangering, Phasing, Tube Amplifying, Echoing, Pitch Shifting, njll.
Pitch ukulungiswa kanye Tuning Vocal for vocals omnandi.
Amandla okusetha imvamisa yeSampling kuze kufike ku-192 Kilohertz.
Ama-plugins wazo zonke izinhlobo ukukhulisa okokufaka kwensimbi yakho
Umphakathi okhethekile we-inthanethi wabaculi bazo zonke izilinganiso.
Ngaphandle kwenguqulo yamahhala, banokubhaliselwe okungu-3 ongakhetha kukho
IZINGA Ukubhaliswa:ikhokhiswa u- $ 0.99 ngenyanga.
Ukubhaliselwa okunwetshiwe:ukhokhiselwe u- $ 1.99 ngenyanga.
SUITE okubhaliselwe:ikhokhiswa u- $ 3.99 ngenyanga.
Lolu hlelo lokusebenza oluza umklomelo lwe-Android luzokuvumela ukuthi usebenze kumathrekhi angenisiwe noma udale amathrekhi ahlukile kusukela ekuqaleni. Ngokutholakala kwethoni lamaphakethe wesampula wamahhala ezinhlotsheni ezinjengeDubstep, i-House, iTrance, iDwala, njll.
IBandLab inesikhungo esingenamkhawulo sokugcina amafu sabasebenzisi bayo. Lokhu kumangalisa nje. Akudingeki ukhathazeke ngokuphatha ama-USB wakho noma yikuphi lapho uya khona. Ungangena ngemvume kusuka ku-akhawunti yakho ye-Android uye kusayithi ledeskithophu bese usebenza kumaphrojekthi wakho.
Uhlelo lokusebenza lulinganiswe ngo-4.4 / 5 esitolo sokudlala se-Google.
Kuyahlekisa ukuthi uhlelo lokusebenza lwamahhala lunganikeza ngezici ezinjalo, ake sithathe uhambo.
Isihleli sokuxuba ithrekhi esingu-12, usifunda kahle, amathrekhi ayi-12 angaxutshwa ngesikhathi esithile neBandLAb. Lokho kumangalisa ngokuphelele ngohlelo lokusebenza lwamahhala.
Ngaphezu kwetoni yezinsimbi ze-MIDI ezibonakalayo ezifana namaDubhu, ama-Guitars, amakhibhodi, njll.
Isici se-Mastering esakhelwe ngaphakathi, esenza ngokuzenzakalela noma iyiphi ithrekhi.
Ngaphezulu kwethani lokusetha kwe-Vocal okungenayo imali yasebukhosini
Amaphakethe womsindo alayishwe kabusha ukukhiqiza ama-grooves amasha sha wabadali ngokukhetha okuningi kwezinhlobo.
IBandLab imahhala ukuyisebenzisa.
4. I-Walk Band
Hamba ngeStudio sakho neWalk Band. Lolu hlelo lokusebenza lulandwa izikhathi ezingaphezu kwezigidi ezingama-50 esitolo sokudlala se-Google. Ngemultitrack synthesizer yayo nemisindo esezingeni lesitudiyo, yenza enye indlela enhle kakhulu yeGarageband ku-Android. Ungafinyelela kuze kube uhhafu wethoni wezinsimbi zomculo kuhlelo lokusebenza, oludlala zombili kumodi ye-solo namakhodi futhi lixhumanisa ngokomzimba amakhibhodi we-MIDI.
Ungarekhoda amagama akho, uwangenise kuhlelo lokusebenza, bese uwafaka ngokuzenzakalela ukuze uzwakale umlingo.
I-Walk Band ilinganiselwe ku-4.2 / 5 esitolo se-Google sokudlala.
Izici ezibalulekile ezinikezwa yiWalk Band yilezi,
Amathuluzi afana nama-Guitars, ama-Drums, ikhibhodi eyakhelwe ngaphakathi.
Amandla okuthola izinsimbi ezixhunywe ngokomzimba.
Ukuguqulwa kusuka kufomethi ye-MIDI kuya ku-Mp3.
Ukuqoshwa kwezwi ngemakrofoni eyakhelwe ngaphakathi nokushuna okuzenzakalelayo.
Kumahhala ukulanda esitolo sokudlala se-Google futhi unikeza ukuthenga kwangaphakathi nohlelo.
5. FL studio Ucingo
Imidondoshiya yama-Computer DAW inohlelo lwayo lwe-android lokuncintisana neGarageband ye-Apple. Inc. Amaphrojekthi womculo we-Multi-track angadalwa futhi alondolozwe kudivayisi yakho ye-Android ngohlelo lokusebenza lweselula lwe-FL Studio. Ungarekhoda imisindo yakho bukhoma noma ungenise okurekhodwe ngaphambilini kusuka kudivayisi yakho bese ukungeza kumabhithi amangalisayo ongawakha ngezinsimbi ezakhelwe ngaphakathi.
Ungafaka ama-plugins azokwengeza kuzici ezikhona zohlelo lokusebenza. Njengomlingani wayo we-PC, i-FL studio mobile inezinto zokwenziwa ezisezingeni eliphakeme kanye nohlu olubanzi lweFX.
Uhlelo lokusebenza lukalwe ngo-4.3 / 5 esitolo sokudlala se-Google.
Izitudiyo zeFL zigcwele izici ezinhle njengohlobo lweDeskithophu, ake sizibheke,
Ngenisa amafayela we-WAV, i-FLAC nama-MP3
Ukusekelwa okugcwele kwe-MIDI ukuxhuma izinsimbi zomzimba.
Uhla olubanzi lwe-FX ukuthuthukisa umkhiqizo wakho
Ukurekhoda ngezwi nokungenisa ngosizo lwe-Autotune ngama-preset.
Ukungenisa kwe-Single & Multitrack MIDI kanye nokuthekelisa.
Intengo yokusebenzisa inguqulo ephelele ngu- $ 14.99. (Uhlobo lwedemo luyatholakala).
# 1 Ngabe iGarageband iyatholakala nge-Android?
Iminyaka:Cha, iGarageband itholakala kuphela kwamanye amadivayisi we-Apple. Kodwa-ke, kunezindlela eziningi ezinhle ongakhetha kuzo, njengoba sishilo esihlokweni esingenhla.
# 2 Ingabe kukhona uhlobo lweDeskithophu lweGarageband?
Iminyaka:Cha, njenge-Android, iGarageband ayitholakali kumaDesktops angasebenzi ku-MacOS. Kunezindlela eziningi ezinhle ezingatholakala kuma-desktops futhi, ezilayishwe izici, futhi ezinye zazo zingcono kakhulu kuneGarageband uqobo.
# 3 Ngidinga uhlelo lokusebenza lweGarageband?
Iminyaka:Uma uyi-ammateur futhi ufuna ukudala umculo usohambeni, nakanjani yebo. Uma ungumnikazi wedivayisi ye-Apple, iGarageband iza ifakwe kuqala, kepha uma ungumsebenzisi we-Android futhi ufuna ukwenza umculo, ayikho indlela yokwenza iGarageband isebenze kudivayisi yakho. Kunezindlela eziningi ezinhle ongakhetha kuzo, sizibalulile ngenhla. Kuyinto elula kakhulu futhi eshibhile ukusebenzisa lezo ezinye izindlela kunokuthenga idivayisi ye-Apple ebizayo.
# 4 Yikuphi phakathi kwezinye izindlela ezishiwo okungcono kakhulu ukuba yi-Mastering?
Iminyaka:IBand Lab iyona ehamba phambili uma kukhulunywa ngezingoma ze-Mastering. It has izilungiselelo ezintathu lapho ungakwazi kahle ithrekhi yakho. Kufanele ungenise ifayili lakho kuyo, futhi iBand Lab izoyilawula ngokuzenzakalela ithrekhi yakho.
Zonke ezinye izindlela ezibalulwe zinhle futhi zinikeza umncintiswano onzima kwiGarageband. Ngenkathi i-DAW ngayinye inobuhle nobubi bayo, ungasebenzisa ngasikhathi sinye ngaphezu kwalezi ezinye izindlela futhi uthole imiphumela emangalisayo. Ukwenza lokho kushibhile kunokuthola empeleni idivayisi ye-Apple yeGarageband. Ngokuhlanganisa lawa ma-DAW ahlukile, ungathola imiphumela engcono kakhulu kuneGarageband. Ungasebenzi ngokwengeziwe, sebenza kahle ngalezi zinhlelo zokusebenza, futhi wenze umculo wakho ufinyelele kubantu abaningi. Ngiyethemba senze isinqumo sakho saba lula nge-guide yethu.Ungabe usalinda. Ngena kuma-DAW futhi uvumele umculi wakho wangaphakathi aphumelele.
Izindlela ezi-5 ezihamba phambili ze-iMovie zeWindows